Ko referendamu ichaitirwa Istanbul here? - RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKo referendamu ichaitirwa Istanbul here?
Ko referendamu ichaitirwa Istanbul here?
14 / 01 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, Channel Istanbul, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
bhatani rakamanikidzwa istanbul
Panguva iyo boka revatongi veAKP vakadaidzira kuravirwa kweKanal Istanbul, sarudzo yekupedzisira yakaitwa. Bato rinotonga haringaendi kureferendamu.
Boka muAKP uye IMM Mutungamiri Ekrem İmamoğlu chikumbiro chereferendamu paCanal Istanbul yakatanga gakava idzva.
Neutral News AgencySekureva kwaMehtap Gökdemir, iyo AKP haina kutarisisa nechisimba kureferendamu chikumbiro uye zvakataurwa pamusoro peKanal İstanbul: 9 ndiyo sarudzo yatinorondedzera. Takaita gadziriro dzeGeneral Assembly. PaGeneral Assembly, musarudzo idzi, Mutungamiriri wenyika akaudza Kanal Istanbul nezve hurukuro iri munharaunda uye isu tine ruzivo. "
'HAKUNA ZVINOTIPA PENYU YEMABHUKU'
"Chichatibvunza, vangani." Kusvika parizvino, vese veOsmangazi, Marmaray, Eurasia Tunaki, 3rd Bridge, 3rd Airport uye mega mapurojekiti vese vakatarisana nekupokana uye semhedzisiro, ivo vakaona kufarirwa kukuru pamberi pevagari vedu. Zvinopikiswa izvi hazvina kana mari pamberi poruzhinji ”.
Referendum Inofanira Kuitwa KuAnticalya Rail Investment Today
Somugumisiro we referendum, motokari yemotokari ichavakwa muHamburg
A Referendum Proposal kubva kuGökçek yeGüvenpark Minibus inodzika
Ruzhinji rwemahofisi ekufambisa muIzmir
Bhurosi, Metro uye Ankaray Zuva reTerendum muAnkara
Channel Istanbul Project ichashandurwa neBOT model
Elvan, Channel Istanbul ichagadzirirwa mazuva ekuuya
Chiteshi cheIstanbul chikwata chichaitwa pamagumo egore
Canal uye nzvimbo yakasvibirira ichavakwa pamwe nekugadzirwa kweCanal Istanbul
Chiteshi cheIstanbul Zuva reMagumo rinofanira kuitwa paC27 Mart
Chiteshi Istanbul Chirongwa chinofanira kuitwa muAtumn!
Chiteshi Istanbul Ndeipi chaungaita?
Ekrem İmamoğlu Akasarudzwa, Will Channel Channel Istanbul Ichaitwa?
Channel Istanbul Tender Inogona Kugadziriswa Mune 2019 Year?
Dollar Rate Yakadonhedzwa, Channel Istanbul Tender Inenge Yachabatwa?
Referendum yeChannel Istanbul
Iko Kune Referendum yeChannel Istanbul?
SAMULAŞ's future Generations Kuzivisa Projekiti Kuenderera
Imamoglu Inodana Erdogan yeBasaksehir Subway